China Heather Jersey yakarukwa mélange yakatambanudza machira vagadziri uye vanotengesa | Huasheng
Nzira mbiri kutambanudza. Kubata nyoro. Mélange mitsetse.
Mhute Wicking, Anti-Bhakitiriya / Anti-utachiona, kutonhora, zvishandiswezve
Iyi heather jersey yakarukwa mélange yakatambanudza machira, yedu chinyorwa nhamba FTT-WB248, yakarukwa ne8% spandex (elastane) uye 92% polyester.
Iyo mélange yakatambanudza machira inoratidzira heather mavara panzvimbo yeavo chaiwo akasimba mavara. Iyo heather jira jira rakarukwa nemusanganiswa wefibisi iyo yakachinjika dhayi kuti igadzire nhehedhi mhedzisiro. Iyo yakawanda mimvuri ye grey kana grey ine rumwe ruvara inowanzo shandiswa. Kune anotevera heather mavara anowanikwa kune edu heather jira jira panguva ino.
Pinki / Pepuru, Hot Pingi / Fuchsia, Turquoise / Royal, Rose / Brown,
Grey / Dema, Waini / Dema, Pepuru / Dema, Coral / Dema, uye Denim / Dema
Iyo yekurapa senge mwando wicking, anti-microbial uye kutonhora zviripo. Uye isu tinokwanisa kushandisa shinda yakadzokororwa yepolyester pane iyi mélange jersey jira kuchengetedza zvirinani pasi.
Iri jira remélange rakanakira leggings, kudziya gumbo, mutambo mapfupi, zvipfeko zvemukati, mabhureki emitambo. Ino fambisa hunyoro kure nemuviri uye kuramba kunhuwa kwekunhuhwirira. Iri heather jersey yakarukwa mélange yakatambanudza machira inoramba ichioma uye isina hwema-isina panguva yekuita kweanopfeka. Zvakanyanya kugadzikana kupfeka.
Kuti usangane neyakaomarara mhando yevatengi, iyi micheka yemeerange inogadzirwa needu epamberi denderedzwa yakarukwa michina yakaunzwa kubva kuEurope. Muchina wekuruka uri mumamiriro akanaka uchaona kuruka kwakanaka, kutambanudza kwakanaka, uye kupenya kwakajeka. Vashandi vedu vane ruzivo vanozotarisira zvakanaka iyi micheka ye mélange kubva ku greige imwe kusvika kune imwe yekupedzisa. Kugadzirwa kwemachira ese e-mélange kunoteedzera maitiro akaomarara ekugutsa vatengi vedu vanoremekedzwa.
Huasheng inotora yakakwira mhando tambo kuti ive nechokwadi chekuita uye mhando yeedu mélange tatamuka machira anodarika epasirese indasitiri zviyero.
Yakaomarara mhando kudzora kuve nechokwadi chekuti mélange yakatambanudza micheka yekushandisa chiyero chakakura kupfuura 95%.
Huasheng anotangisa nyowani yakateedzana mélange yakatambanudza machira pamwedzi.
Huasheng inotarisira kuenderera mberi nekugadzira huwandu hwakanyanya hwevatengi. Isu hatisi chete kupa edu mélange kutambanudza machira kune vatengi vedu, asi zvakare kupa yakanakisa sevhisi uye mhinduro.
Ane makore gumi nematanhatu 'ruzivo rwekutambanudza machira ejuzi, Huasheng akashanda zvine hunyanzvi nyika dze40 vatengi pasi rese.
Pashure: Yepamusoro yepamusoro DTY polyester yedhaimani mesh jira remitambo nembambo - Huasheng
Zvadaro: Cationic polyester spandex mélange jersey machira
Bhuruu Melange Mucheka
Grey Melange Mucheka
Heather Melange Mucheka
Chiedza Grey Melange Jira
Melange Mhedzisiro Mucheka
Melange Jersey Mucheka
Yakasarudzika melange polyester spandex yakatambanudza j ...
Polyester uye spandex kutonhora melange jersey fa ...
Kurumidza-kuomesa polyester spandex single jersey me ...
Zvinhu zvenaironi polyester uye spandex yakakwirira tatamuka melang ...